मेरो तन, मन, सबथोक कला क्षेत्र
By कल्पना शर्मा on	 २५ पुष २०७३, सोमबार १३:३३ · मनोरञ्जन
माेडल तथा नायिका
सर्लाही लालबन्दीमा जन्मिएकी मन्जिता केसी आकर्षक व्यतित्व, सुन्दर मुहार, मिलेको जिउडालकी धनी छिन् । व्यबस्थापन संकायमा स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेकी उनी मोडलबाट नायीकासम्मको यात्रा पार गरी सकेकी छिन् । चर्चित मोडल मध्येकी एक मञ्जिता केसीसँग नवीन सन्देश संवाददाता रश्मी महतले गरेको अन्तरवार्ता ।
आजभोली केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म्यूजिक भिडियोसँगैै स्टेज कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छु ।
कला क्षेत्रमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो ?
म यो क्षेत्रमा २०६८ सालदेखि प्रवेश गरेको हँु ।
कलाक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कत्तिको संघर्ष गर्नुभयो ?
म बच्चादेखि नै कला क्षेत्रमा रुची भएको व्यति हुँ । सानैबाट नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने बानी थियो । विस्तारै समयले साथ दिंदै गयो । लंकाको सुटिङ्ग युनिट सर्लाही आईपुगेको रहेछ । संयोगले मैले सानो भूमिका पाएँ र त्यसैबाट मेरो यात्रा सुरु भयो । ठूलो संघर्ष गर्नुपरेन ।
सुरुवाती दिनमा कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्न एउटा सानो भूमिकाको लागि सर्लाही देखि काठमाडौं आउनु भएको रैछ हैन ?
पहिलो चोटी कसैले अभिनय गर्न बोलाएकाले म एकदमै खुसी थिएँ । सायद त्यो नै मेरो जिन्दगीको खुसीको पल थियो । कुनैपनि कुरा एकैचोटि प्राप्त हुँदैन । विस्तारै हुन्छ । सानो भूमिका बाटै ठूलो हुने हो ।
पछिल्ला समयमा कला क्षेत्रमा थु्रपै विकृतिहरु भित्रिएको आरोप छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मलाई सयमा सय विकृति होला जस्तो लाग्दैन । कतै कतै विकृतिहरु होलान् तर यसमा राम्रा कामहरु पनि भई रहेका छन् । कुनै एकजनाले विकृति गर्यो भन्दैमा सबैलाई सोही दृष्टिले हेर्नुभएन । दर्शकहरुले मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ । कलाकारहरुले राम्रो काम गरेपछि प्रोत्साहन पनि त पाइरहेका छन् नि होइन ?
अहिले कला क्षेत्रमा लाग्नेहरु धेरै नै छन्, कोही सफल पनि भएका छन् भने कोही सुरुवाती चरणमै हराएका छन्, यो क्षेत्रमा टिकीरहन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
कुनैपनि काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो काम के हो भनेर जानेर÷बुझेर आयो भने लामो समयसम्म टिक्न सकिन्छ । मैले पनि एउटा गीत गरेपछि यो क्षेत्र कस्तो हो भनेर यसको बारेमा धेरै नै अध्ययन गरें । यो क्षेत्रमा आएको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म खाली बस्नु परेको छैन ।
भनेपछि कला क्षेत्रमा लागेरै जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ हैन ?
मेरो विचारमा कला क्षेत्रमा लागेर बाँच्न सक्ने अवस्था छ । मेहनत गर्नुपर्छ, पक्कैपनि यहि क्षेत्रमा लागेरै जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ ।
भविष्यमा यही क्षेत्रमा रम्नुहुन्छ वा अन्य केहि सोच छ ?
समयले साथ दिएसम्म यहि क्षेत्रमा काम गर्छु । मेरो तन, मन, सबथोक यहि क्षेत्र हो । अरु क्षेत्रको बारेमा सोच्न पनि सक्दिन ।
अहिलेसम्म कतिवटा म्युजिक भिडियो र फिल्ममा अभिनय गर्नुभयो ?
म्यूजिक भिडियो ५ सय भन्दा बढी गरें होला । फिल्म चैं अहिलेसम्म ३ वटा गरेको छु । ‘च्याम्प्यन’ भर्खरै रिलिज भएको छ । अरु २ वटा रिलिज हुन बाँकी छ ।
मोडलिङ गरेको पहिलो गीत कुन हो ?
विष्णु माझीले गाएको ‘धर्ती गोलो छ निरमाया’ भन्ने बोलको गीत हो ।
आफुलाई कुन रुपमा चिनाउनु चाहनुहुन्छ ?
म एउटा भर्सटाइल कलाकार भनेर चिनाउनु चाहन्छु ।
कस्तो प्रकारको फिल्ममा कोसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
मलाई फिल्ममा यस्तो उस्तो प्रकारको भूमिका भन्दा पनि आर्यन सिग्देलसँग कुनैपनि फिल्म खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।
विवाह कहिले गर्ने ?
अहिले अलि बेला भएको छैन ।
कस्तो प्रकारको जीवन साथीको चाहना राख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला मलाई बुझ्ने हुनुप¥र्याे । म कला क्षेत्रमा छु । अरुको कुरा सुनेर त्यसैको पछि लाग्ने हुनुभएन । मलाई बुझ्नुप¥र्यो र साथ दिने खालको भए जीवन सहज हुन्छ ।
खाली समयमा के गर्न मनपर्छ ?
सपिङ गर्न जान्छु । नृत्यको अभ्यास गर्छु ।
कलाक्षेत्रमा आउन चाहने युवापिढीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
म हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु । अहिलकोे पुस्ताको प्रतिस्पर्धा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छ ।
त्यसकारण म यो क्षेत्रमा काम गर्न तयार छु भनेर आईदिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ की ?
नवीन सन्देश पत्रिकाले मलाई आफ्नो भावना राख्ने मौका प्रदान गरेको छ । हृदयदेखिनै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । नेपाली कलाकार र कलाक्षेत्रलाई माया गरिदिनुहुन सबैमा आग्रह गर्छु ।
६ भाद्र २०७४, मंगलवार १३:५८ 0
मोडल तथा संचारकर्मी राज लुइटेल सम्मानित
२७ श्रावण २०७४, शुक्रबार १२:५९ 0
‘फिटनेश सेन्टर’ आर्यन र पूजाले गरे उद्घाटन
२५ श्रावण २०७४, बुधबार ११:३७ 0
कमल थापाको ग्रेट फ्यान रेखाले रोजिन् पशुपति